Inkonzo yethu-uShijiazhuang Jipeng Ukungenisa izinto kunye nokuthumela ngaphandle, Co, Ltd.
1. Yasekwa ngonyaka ka-1998, inkampani yethu inembali ende, ethi inzuzo ingaphaya kwezigidi ezingama-20 ezigidi zaseMelika. Sinezinto ezinamava zokusebenzela abathengi bamanye amazwe, kubandakanya nomphathi weprojekthi okhethekileyo ukuxoxa ngeemveliso, ukuphatha amaxwebhu, njl njl. Singanikezela kungekuphela iimveliso ezisisigxina, kodwa sinokuba yi-OEM eprinta igama labathengi bamanye amazwe okanye uphawu, kunye Kananjalo bangenza iimveliso ezahlukeneyo okanye iindawo zokuphosa ngokwazo imizobo yomthengi welinye ilizwe okanye iisampuli.
2. Abathengi banokonwabela ukuhanjiswa okukuko ngokulula nangokufanelekileyo kunye nokuhanjiswa kweempahla apha, enye yeendlela zethu ezilungileyo kukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zeempahla kwisingxobo esipheleleyo, abanye abathengi bethu bafuna iintlobo ezingaphezu kwe-5 zeempahla ngexesha elinye. Oko kuya kulunge ngakumbi kubathengi bethu.
3. Ulawulo lwethu lomgangatho yenye inkonzo exabisekileyo kubathengi bethu.Ngokuveliswa okanye ngaphambi kokuba kuthunyelwe, ulawulo lwethu lomgangatho luya kuya kumzi mveliso ukukhawulezisa ukuhanjiswa kunye nokujonga umgangatho kunye nengxelo ebhaliweyo. Amanqaku angafezekanga aya kwenqatshwa kulawulo lwethu lomgangatho, siya kubuza umenzi ukuba avelise kwakhona okanye aphucule umgangatho de babe bafanelekile ukuba bahlangane nabathengi bangaphandle.